विश्व च्याम्पियनसिपमा भिडेकी पौडीबाज अनिता स्विमिङ पुलभित्रै बेहोस भएपछि... पौडी पोखरीभित्रै बेहोस भएकी उनलाई प्रशिक्षकले उद्दार गरेकी थिइन्। उनले आफू जीवित रहन पाउँदा भाग्यमानी महसुस गरेको बताएकी छिन्। बिहीबार, असार ९, २०७९
पूर्व मिस ब्राजिलको हृदयघातका कारण २७ वर्षको उमेरमा निधन पूर्व मिस ब्राजिल ग्लेसी कोरेइयाको २७ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। टन्सिल निकाल्नका लागि गरिएको शल्यक्रियाका कारण उनलाई ब्रेन ह्यामरेज र हृदयघात भएको थियो। बिहीबार, असार ९, २०७९
अध्ययनको दाबीः १० सेकेन्डसम्म एउटा खुट्टामा उभिन नसक्नेलाई मृत्युको उच्च जोखिम तपाईँमा एउटा मात्र खुट्ट टेकेर केही बेर उभिने बानी छ कि छैन्रु यदि छैन् भने केही सेकेन्डका लागि भएपनि उभिने प्रयास गर्ने किरु किनकी एउटा पछिल्लो अध्ययनले कम्तीमा १० सेकेन्ड एउटा खुट्टामा उभिन नसक्ने वयस्क व्यक्तिमा मृत्युको जोखिम हुने गर्छ। बिहीबार, असार ९, २०७९
भारत: एकैदिन थपिए १३ हजार बढी कोरोना संक्रमित भारतमा पछिल्लो चौबिस घण्टामा १३ हजार ३१३ जना कोरोना संक्रमण पुष्टी भएको छ। सोही अवधीमा १० हजार ९७२ जना संक्रमणमुक्त भएका छन्। बिहीबार, असार ९, २०७९
म्याराडोनाको उपचारमा लापरबाही गरेको आरोपमा आठजना स्वास्थ्यकर्मीमाथि मुद्दा अभियोग पुष्टि भएमा प्रत्येक चिकित्सकहरूले आठदेखि २५ वर्षको जेलसजाय भोग्नुपर्ने बताइएको छ। मुद्दाको सुनुवाइको समय चाहिँ तय भइसकेको छैन। बिहीबार, असार ९, २०७९
डेनमार्कमा कोरोनाविरुद्ध चौथो डोज खोप लगाउने तयारी सरकारले कोरोनाविरुद्धको चौथो मात्रा खोप लगाउन सबैलाई आग्रह गर्ने सरकारी अधिकारीहरूले जनाएका छन्।उनीहरूका अनुसार झन्डै २० लाख मानिसलाई चौथो मात्रा खोप लगाउने गरी तयारी भइरहेको छ। बिहीबार, असार ९, २०७९
अस्पतालका कर्मचारीले शिशुको टाउको काटेर आमाको पेटभित्रै छोडिदिएपछि... पाकिस्तानको सिन्ध प्रान्तको ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्रका कर्मचारीले एक नवजात शिशुको टाउको काटेर आमाको पेटभित्रै छोडिदिएपछि ३२ वर्षीया महिलाको ज्यान जोखिममा परेको छ। मंगलबार, असार ७, २०७९
भारतमा पछिल्लो २० दिनमा कोरोना संक्रमित पाँच गुणा बढे भारतीय स्वास्थ्य विभागका अनुसार जुन १ मा ३९१७ संक्रमित फेला परेको भारतमा ५ जुनमा ४३६२, जुन १० मा ८३१८, जुन १५ मा १२१५४ र १९ जुनमा १२२१८ जना संक्रमित फेला परेका छन्। मंगलबार, असार ७, २०७९
साइकलबाट लडेका अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ? अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन साइकलबाट लडेका छन्। साइकल चलाइरहेको बेला सन्तुलन गुमाएर राष्ट्रपति बाइडेन साइकलसहित लडेका हुन्। आइतबार, असार ५, २०७९
भारतमा १२ हजार ५०० कोरोना संक्रमित थपिए भारतमा बुधबार र बिहीबार दुईदिन लगातार कोरोना संक्रमितको संख्या १२ हजार नाघेको केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले शुक्रबार जानकारी दिएको छ। शुक्रबार, असार ३, २०७९
मलेसियामा २४ घन्टामा २ हजारभन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण, ५ जनाको मृत्यु मलेसियामा गएको २४ घन्टायता मात्र कम्तीमा २ हजार ३३ जनामा कोरोना संक्रमण भएको बताइएको छ। यहाँ बाहिरबाट आएकामा नभएर देशभित्रै यी सङ्क्रमितहरु भेटिएको पनि यहाँका स्वास्थ्य क्षेत्रका अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन्। शुक्रबार, असार ३, २०७९
ह्वाइट हाउसका प्रमुख चिकित्सा सल्लाहकार डा एन्थोनी फाउचीलाई कोरोना संक्रमण उनमा कोरोनाको हल्का लक्षणहरू देखिएका छन्। डा फौसी निको नभएसम्म अलग्गै बस्नेछन् र आफ्नो घरबाटै काम जारी राख्नेछन्। उनले कोरोनाको सबै डोज खोप लगाइसकेको उनको कार्यालयले जनाएको छ। बिहीबार, असार २, २०७९
बेलायतमा मंकीपक्स संक्रमितको संख्या ५०० नाघ्यो पछिल्लो आधिकारिक तथ्याङ्क अनुसार बेलायतमा बुधबारसम्म मंकीपक्सका संक्रमितको संख्या ५ सय नाघेको छ। बिहीबार, असार २, २०७९
हङकङमा एकैदिन थपिए हजारभन्दा धेरै कोरोना संक्रमित बुधबार हङकङमा एक हजार ४७ नयाँ संक्रमित थपिएका हुन्। अप्रिल १३ यता पहिलोपटक हङकङमा एक हजारभन्दा धेरै नयाँ संक्रमित थपिएका हुन्। बिहीबार, असार २, २०७९
भारतमा १२ हजार भन्दा धेरैमा कोरोना संक्रमण, ११ जनाको मृत्यु अहिलेसम्म भारतमा कोरोनाका कारण ५ लाख २४ हजार ८०३ जनाको मृत्यु भइसकेको छ। बिहीबार, असार २, २०७९
नयाँ दिल्लीमा संक्रमितको संख्या ८२ प्रतिशत वृद्धि सरकारी अधिकारीले बुधबार दिएको जानकारीअनुसार अघिल्लो दिनको तुलनामा बुधबार ८२ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो। बुधबार, असार १, २०७९
जर्मनीमा फेरि बढे कोरोना संक्रमित, दैनिक १ लाख जनामा संक्रमण जर्मनीमा फेरि पनि कोरोना भाइरसका संक्रमितहरु बढ्न थालेका छन्। यहाँका स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारीहरुले दिएको जानकारीअनुसार यहाँका अधिकारीहरुले पछिल्ला दिनमा दैनिक करिब एक लाख संक्रमित पाइने गरेको पाइएको बताएका छन्। बुधबार, असार १, २०७९
ममको डल्ला अड्किएर एकजनाको मृत्यु एम्सका फोरेन्सिक विज्ञहरूले पुरुषको मृत्युको कारण पत्ता लगाएपछि चिकित्सा निकायले सबैलाई ‘होशियारीसाथ निल्न’ सुझाव दिएको छ। उनलाई दिल्लीको एम्समा मृत अवस्थामा पर्‍याइएको थियो। बुधबार, असार १, २०७९
भारतमा थप ६५ सय नयाँ संक्रमित, अघिल्लो दिनभन्दा १८ प्रतिशत कम भारतमा कोरोना भाइरसबाट थप ६५ सयभन्दा बढी संक्रमित भएका छन्। सरकारी अधिकारीहरुले मङ्गलबार दिएको जानकारीअनुसार पछिल्लो एक दिनमा छ हजार ५९४ जना नयाँ संक्रमित भएका हुन्। मंगलबार, जेठ ३१, २०७९
क्यानाडाका प्रधानमन्त्रीलाई दोस्रो पटक कोरोना संक्रमण - क्यानाडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रयुडेउलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। उनलाई यो दोस्रो पटक कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको जनाइएको छ। मंगलबार, जेठ ३१, २०७९
मनिषा कोइरालादेखि सोनालीसम्मः यी हुन् क्यान्सर जित्ने बलिउड अभिनेत्री बलिउडमा महिमाजस्तै थुप्रै अभिनेत्रीहरु छन्, जसले जीवनमा क्यान्सरसँग जित हासिल गरेका छन्। महिमादेखि सोनाली बेंद्रे हुँदै मनीष कोइरालाजस्ता अभिनेत्रीहरु क्यान्सरसँग जीत हासिल गरेका अभिनेत्रीहरु हुन्। आइतबार, जेठ २९, २०७९
सोनिया गान्धी अस्पताल भर्ना उनलाई केही दिन अस्पतालमै चिकित्सकको निगरानीमा राखिने पार्टी प्रवक्ता रन्दीप सिंह सुर्जेवालाले जानकारी दिए। उनका अनुसार गान्धीको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य छ। आइतबार, जेठ २९, २०७९
गायक जस्टिन बिबरलाई अनुहारको पक्षघात, के हो उनलाई भएको राम्से हन्ट सिन्ड्रोम? राम्से हन्ट सिन्ड्रोम मानिसको अनुहारको फेसियल नर्भमाथि हुने रोग हो। गायक बैवरले यो साता आगामी वर्षको फेब्रुअरीमा विश्व भ्रमणको रुपमा रहेको तीन कार्यक्रम स्थगित भएको बताएका थिए। शनिबार, जेठ २८, २०७९
ब्राजिलमा पनि भेटियो मंकीपक्स ब्राजिलको साओ पाउला सहरमा बिहीबार संकीपक्सको पहिलो घटना पुष्टि भएको स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारीहरूले बताएका छन्। शुक्रबार, जेठ २७, २०७९
क्यान्सरसँग जुधिरहेकी अभिनेत्री महिमा भन्छिन्– एउटा बच्चासँगको भेटले शक्ति मिल्यो अनुपम खेरले सार्वजनिक गरेको भिडियोमा महिमासँग उनले प्रश्नोत्तर गरेका छन्। जवाफमा महिमाले आफ्नो अनुभव सार्वजनिक गरेकी छिन्। उनले भनेकी छिन्, ‘मैले जब आफ्नो कपाल गुमाए, तब खै कसरी मलाई निकै कल आउन थाल्यो। यी फोनहरु वेब सिरिजमा काम गर्नका लागि पनि थियो।’ शुक्रबार, जेठ २७, २०७९